Mareykanka oo war deg deg ah kasoo saaray dagaalka ka socda gobolka Tigray | Warkii.com
Home warkii Mareykanka oo war deg deg ah kasoo saaray dagaalka ka socda gobolka...
Mareykanka oo war deg deg ah kasoo saaray dagaalka ka socda gobolka Tigray
Warka kasoo baxay Mareykanka ayaa yimid kadib markii ay soo baxeen warbixino sheegaya in boqolaal qof lagu xasuuqay magaalo ka tirsan gobolka, sida ay sheegtay hay’adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International.
Dagaalka gobolka Tigray ayaa sare u qaaday cabsida laga qabo in Ethiopia ay lugaha la gasho dagaal sokeeye.
Dagaalka ayaa durba sababay xaalad bani’aadannimo oo liidata, ayada oo 14,00 oo qof oo shacab ah ay ka qaxeen gobolka, islamarkaana u gudbeen dalka Sudan.
Ra’iisul Wasaare Abiy Ahmed ayaa howlgalka militari ee gobolka Tigray amray 4-tii November, kadib markii uu ku eeedeeyey ciidamada TPLF inay weerareen xero militari oo ku taalla gobolka, TPLF waa ay beeniyeen eedeyntaas.
Madaxa xuquuqda aadanaha QM Michelle Bachelet ayaa ku baaqday baaritaan deg deg ah oo lagu sameeyo xasuuqa la sheegay inuu ka dhacay magaalada Mai-Kadra, kaasi oo goobjoogeyaal ay sheegeen inay ka dambeeyaan ciidamada TPLF.
Previous articleMuqdisho iyo Mucaaradka: Maxaa la filaa todobaadkan
Next articleAbiy oo bilaabay qorshe ka dhan ah saraakiisha Tigray-ga ee jooga gudaha Somalia
Ra’iisul Wasaaraha Ethiopia Abiy Ahmed ayaa maanta isku dayey inuu hoos u dhigo cabsida laga qabo dagaal lagu hoobto oo ka dhaca gobolka Tigray...